IiLoji ezimbini zoNyango-#3 - I-Airbnb
IiLoji ezimbini zoNyango-#3
IYunithi yezoNyango ezimbini #3 "ngumzala" kwiiyunithi ezimbini zeLodge ye-Medicine 1 kunye ne-2 duplex ebekwe kwindawo ekude. I-"sticky bud suite" yethu ebizwa ngokuba zii-cottonwood buds ezincangathi eziwa kwimithi emikhulu ejikeleze le propati, isandula ukugqitywa. Ifakwe iibhloko ezimbini empuma kuhola wendlela #2 eMonti Glacier Park, le yunithi ibonelela ngokufikelela ngokulula kwiindawo zokutyela kunye namashishini asedolophini, kubandakanya neSikhululo saseMidvale, iBrown House Smiley Museum kunye nePottery, kunye neGlacier Park Lodge enomtsalane.
Iyunithi yethu ekuqaleni yayiyilwe njengegumbi lesikolo nguMyili wezakhiwo uWilliam P. Grant kwindawo yakhe yokuhlala yabucala. Sele ihlaziywe ngokutsha njengendawo eqhelekileyo enegumbi elinye lokulala elikhulu, igumbi lokuhlambela impahla, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elincinci kunye nendawo yokuhlala. Ifenitshala yesikhumba igxininisa indawo, kunye nezixhobo zentsimbi engatyiwa, isinki enkulu yekhitshi kunye ne-granite countertop. Ikhaphethi yePlush igubungela ngokuyinxenye umgangatho wegumbi lokulala kwaye amagumbi amabini abanzi abonelela ngesixa esaneleyo sokugcina iindwendwe.
4.69 · Izimvo eziyi-45
Ubumelwane buhlala buyindawo ezolileyo, nangona ipropathi ibekwe kuphela kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kuhola wendlela kunye neendawo zokutyela. Ngexesha lasehlotyeni, i-East Glacier Park iba yindawo yokuphumla "yokukhwela" kunye neevenkile zezipho, imyuziyam encinci, i-Glacier Park Lodge, ibala legalufu, iigalari zobugcisa, indawo yokubhaka, kunye nezinye iindawo ezininzi zasekuhlaleni ukutyelela.
Abanini bepropathi bagcina indawo edibana neyunithi yezonyango ezimbini #3 kwaye ngoku banabaqeshi bexesha lasehlotyeni kwesi sithuba kwicala elingasentla lendlu enkulu. Abarentayo banokufumaneka ukuphendula imibuzo okanye ukuhambisa iindwendwe kwimisebenzi yasekuhlaleni. Abanye abantu bobutyebi bayafumaneka xa kukho imfuneko yoko. Ukuba ulapha ngempela-veki, unokusibhaqa sisenza umsebenzi waseyadini, okanye singena kummelwane wethu!
Abanini bepropathi bagcina indawo edibana neyunithi yezonyango ezimbini #3 kwaye ngoku banabaqeshi bexesha lasehlotyeni kwesi sithuba kwicala elingasentla lendlu enkulu. Abarentayo…